Amamodeli we-glucometer Frechester Libre (Libre Fre Frere) > Ukuxilonga
Amamodeli we-glucometer Frechester Libre (Libre Fre Frere)
ngesilinganiso samanje se-libra, kubiza cishe ama-ruble ayi-10,000 ngenyanga (ama-2pcs * ama-60 euros (ama-ruble angama-76) = i-9120 + ukulethwa kwama-euro ayi-15-20 eRussia.)
Futhi asibeki inzwa hhayi engalweni kuphela, kodwa nasemlenzeni nakumaqhubu.
Yebo, kunjalo) Ngisanda kukhombisa izindleko ku-LONTO lwendatshana.
Ngokuqondene nendawo efakwa kuyo, njengakwaDescom, ezinye izindawo zingasetshenziswa. Kwizinto ezibonakalayo engibhale ngazo kuphela ezinconywe ngokusemthethweni ngumenzi, ukuze ngingasolwa ngokulamula)))
Futhi ngingathola ukuthi yini enamathayo? inzwa yami iwile ngehora kusuka esandleni ((
Sigqoka uDex. Okokuqala ngagxilisa udaka lwefilimu kuHydrofilm phezulu, ngabe sengifunda enye indlela “yokuqinisa” nje nomnikazi weLibre - ibhandeji lokuzinamathela likaPheha-haft waseHartmann. Inosayizi nemibala ehlukene. Kubukeka kucocekile kakhulu futhi kubambe ngokuqinile. Ngakho-ke hamba manje
escabar.maria wamukelekile. Ake ungitshele nge-bandage, uyisebenzisa kanjani? Simgqokise e-dexcom izolo futhi wehle naye ekuseni.
Ingabe unayo i-bandage ka-Peha-Haft? Sibabopha bonke: zombili inzwa nangaphansi. Akakaze asilahle kuze kube manje. Into esemqoka ukubopha ngebhandeji ngokuqinile, kunokunwebeka, kuzolula isikhashana igqoke. Mhlawumbe umbophele kakhulu. Uma uyigqoka isikhathi eside, ingagingqa futhi inyakaze, kepha lokhu akubikho ngaphambi kwesonto lesokisi. Zama ukukusonga ngokuqinile futhi i-bandage ingaba banzi (sinobude obu-8 cm be-dex no-10 cm ngaphansi)
Uwathatha kuphi lawo manani ?? Eshibhile kunazo zonke ezitholakele - 7500 ngenzwa eyodwa ..
Ngabe usho ukuthini? Inzwa ye-Dexcom noma ye-Libre. Ngithatha izintengo zeLibre kusuka kuwebhusayithi esemthethweni ye-Abbott (zingama-euro). I-Dexcom yethulwe kumasayithi waseRussia - ikhasi lokuqala lenjini yokusesha)) Angikaze ngiyibone ngo-7500.
Sicela unikeze isixhumanisi kuwebhusayithi esemthethweni
Ungasinikeza isixhumanisi esizeni lapho ungathenga khona ama-Libre nezinzwa zama-euro angama-60?
Hhayi impela 60 kodwa cishe ..)) www.mylibre.ru
Ngithengile kwisiza saseFrance https: //www.abbottdiabetestore.fr
Njengomnikazi wamadivayisi amabili, ngingasho ngokuqiniseka ukuthi ama-lag kumanani weLibra angaphansi kweDekskom, futhi ukunemba kuphezulu. Sebenzisa izinzwa ngokuhlangana ne-smartphone kulula kakhulu. Uma kungenjalo ngentengo yezinzwa, khona-ke abanesifo sikashukela abaningi sebejabule kaningi.
Uxolo, bengingaqondi kahle. Ufaka izinzuzo ze-Libre, bese ukhuluma ngezinzwa nge-smartphone. Mayelana nokuhlanganiswa ne-iPhone - lokhu sekusebenza ku-Dexcom, akunjalo? Futhi kuzwakala ngathi futhi ngeLibre.
Futhi intengo inguyebo, kepha uma kuqhathaniswa nezindleko zakwa-Dexcom, iLibre iyimpumelelo yangempela ngokuya ngokutholakala, kufaniswa nentengo yemivimbo yokuvivinya.
ILibra ingasetshenziswa nanoma iyiphi i-smartphone lapho kune-NFC. Awukwazi ukuthenga umfundi
UDiana, yebo uqinisile. Ngihlela ukubhala iposi elihlukile mayelana namathuba okuhlanganisa i-Libre ne-smartphone. Lapho ngibhala le ndatshana, azange kube nezinto ezintsha okwamanje)
I-Diana, "sebenzisa nganoma iyiphi i-smartphone lapho kune-NFC" - ku-Android'e?
Ngiyabonga, i-athikili ethokozisayo kakhulu. Uma kungekho nzima, unganikeza isixhumanisi kunoma yiluphi ulwazi olusemthethweni ukuthi lelo divayisi kufanele lingene emakethe yaseRussia kungekudala (ngonyaka we-2016)? Angiwutholi umsuka walezi zindaba nomaphi. Ngiyabonga kusengaphambili!
Ngabiza i-Abbott yaseRussia, bangichazela ukuthi manje le divayisi selizogunyazwa eRussia, kufanele liqhubeke lithengiswe ekwindla. Baze bemukela noku-oda kwangaphambili.
Ngisanda kufona e-Abbott Diabets Care. Basho ukuthi ngenkathi isitifiketi sisaqhubeka. Kusehlelweni futhi kungahle kuthengiswe ngasekupheleni konyaka, mhlawumbe ngisho nasekuqaleni. Abashongo kuma-oda wangaphambilini, bathintana, bathi bazothinta uma amadivaysi esekulungele ukuthengiswa. Bathe ngamanani ukuthi ngeke babe ngaphezulu kakhulu kunabaseYurophu, bacabangele izifundo, mhlawumbe bephansi kancane (kepha kungakwenza), kepha nakanjani bangabi ngaphezulu.
Okwamanje, esizeni saseJalimane - lokhu (okujikelezayo) ama-euro angama-170 kusethi ngalinye, ama-60 euros ngenzwa ngayinye
E-Mylibre.ru, amanani entengo awaphakeme kakhulu. Ama-200 euros nama-euro angama-69, kuphela asikho isitifiketi, kepha ungaba ngumnikazi ngaphambili kakhulu kobusika :)
Uhlelo lokusebenza le-liapp selivele ku-playmarket, likuvumela ukuthi usebenzise i-smartphone yakho ku-android njengomfundi. Ukuphela kwento ekuyo kufanele kube umsebenzi wokudlulisa idatha weNFC
ngicela ungitshele. Isikhathi sokuqala ukuthi bayale ukukhululeka nge-e2russia (umlamuli waseJalimane), kepha iphasela lahamba isikhathi eside-amasonto ama-3. Manje sifunde nge-mylibre.ru (futhi ongumlamuli), izinzwa ezikhona zibiza kakhulu, kepha ukulethwa kushesha. Ingabe ukhona umuntu o-oda ngakho? akukho ukubuyekezwa okuthile ku-Intanethi mayelana nomsebenzi wabo, bengingafuni ukundiza
Abaziyo abaningi ba-oda nge-mylibre - wonke umuntu ujabule, akunankinga. Kukhona "ihhovisi" elijwayelekile, laba bafana benze isayithi elihle laleli bhizinisi.
Kepha awazi, mhlawumbe umbuso ngandlela thile uzothengisa okungenani ezinzwa. Futhi ke ku-10,000 ngenyanga ukunikela njengoba kungakenzeki.
Okokuqala, iLibre namanje ngeke idlulise isitifiketi eRussia. Bathembise ukuthi bazoqala ukuthengisa ngoSepthemba. Okwesibili, impela kukhona inkulumo uLibre afuna ukuyifaka ekuthengweni komphakathi. Kepha noma ngabe unolwazi olunjalo olukhuthazayo esimweni sethu, asikho isidingo sokukhuluma nganoma yikuphi ukuhlelela amasu. Namuhla bayapha, kusasa bayathatha. Futhi isikhulu sihlala silungile, hhayi isiguli. Ngakho-ke, anginakhohlisa kule ndaba. Into esemqoka ukuthi abantu akufanele babekwe kuma-insulin asekhaya kanye nama-satellite glucometer. Lapha ngeke kube khona isikhathi sezinzwa)
Njengoba udokotela wethu e-ESC angichazela, i-libra idinga ukulinganiswa: njalo ngehora lesi-8 noma lesi-9 (angikhumbuli, le ngxoxo ibicishe ibe yinyanga nengxenye noma amabili edlule), udinga ukukala ushukela, ngaphandle kwalokho umfundi uzoyeka ukubonisa amanani. Mhlawumbe wayeqonde ukuletha umfundi ku-inzwa? Ngiwuthande umbono wokuthi ushukela ungalinganiswa ngokunembayo ngokumane uwulethe ku-sensor. Kepha angithandi ukuthi uzokwenza zonke izibalo ngokwakho. Sekuphele izinyanga eziningi siphokophele empompini, okulula kakhulu, sibala i-insulin (vele, siyazilungisa uma kunesidingo), singena nje.
Simkhonkotha iDeksky ehlombe (ingane ineminyaka emi-3 ubudala ubudala izinyanga ezine, besilokhu sigqoke inzwa lapho kusukela ngonyaka we-10 izinyanga). IDekskom ine-lag yemizuzu engama-20 ngokuya ngezinkomba.
Umyeni wami wathenga i-transmitter ekhethekile, wafaka izinhlelo kuma-Smartphones: eyethu, lapho i-Intanethi ivuliwe, bonisa ushukela (osuvele futhi ukude), kukhona nefoni ekhethekile ekhombisa ushukela kwi-bluhlaza. Isiginali yakhe isebenza kahle kunale ye-dexcom. Naphezu kweqiniso lokuthi usebenza ngokudlulisa isignali yakhe. Akukho ukulinganiswa okudingekayo. Ayikho into enjalo engasebenzi amahora amabili uma uguqula / uqala kabusha inzwa - ihlala isebenza.
Natalia, liyini iphampu yakho? Setha ngesilinganiso noma ngokwakho? Sizoshintshela futhi empompini, ezibambeni esevele zikhathele. Kusejwayelekile phakathi nosuku, futhi ukuvuka ebusuku bese ujova ebumnyameni kuyacasula kakhulu.